ကြိုက်လို့ ဖဘမှာ ရှဲတာ..
Be the first of your friends to like this. · Error
16/4/12 4:10 AM
ဖဘမှာ မမပန်ပန်ဆီကနေ ဒီစာကိုတွေ့တာ
16/4/12 4:45 AM
သျှီ့သီချင်းထဲမှာတော့ ...ဘာတွေကိုရင်းမလဲ ...
ရက်စက်တဲ့ စိတ်လိုတယ် အသည်းမာနိုင်ရင် မင်းလိုတဲ့အရာရမှာပဲ... တဲ့ ။
17/4/12 7:17 PM
ဇာတ်ကွက်တွေက သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ရှေ့မှာ တဖျတ်ဖျတ် ကခုန်သွားကြ..
ပင့်သက်ကို လိုက်ဖမ်းဖို့တောင် သတိမေ့သွားခဲ့ရ.
အသိတရားပြန်ဝင်လာချိန်မှာ လက်ချောင်းတွေက ကော်မန့်ကိုရေးပြီးလို့ Publish တောင် လုပ်ပြီးနေပြီ...
ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ထူးဆန်းစွာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်ပြီး နှုတ်ခမ်းထောင့်တစ်ချက်ကွေးလို့ ပြုံးရင်း ခပ်တိုးတိုး ရေရွတ်မိခဲ့တယ်..
ကျွန်တော်မျောသွားလို့ပါ မမယ်ကိုး... ;)))
29/5/12 1:29 PM
ဖတ်ရင်းနဲ့ မော်ဒယ်မင်းသမီးလေးတွေကိုတောင် ပြေးမြင်ယောင်မိသေး။ ကြော်ကြားခြင်းကို ရဖို့ သွေးသားစတေးရတဲ့အဖြစ်တွေနော် မယ့်။
ကောင်းတယ် မမယ်ကိုး ...
ဒါပေမယ့် ဒီလို အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ ...
သူကလဲ ဒီ Field ထဲမှာ
နဲနဲတော့ ရှားလာပြီထင်တယ်နော် ...
အနေအထားလေးတွေ တွေ့ရတတ်လို့ပါ ..
Anwy, good Essay with nice perspective.
16/10/17 6:09 AM